Ny fitendry virtoaly aminny aterineto noho ny toerana na ny bilaogy | Loderi.com
Ny fitendry virtoaly an-tserasera noho ny toerana na ny bilaogy
raha ny toerana mpitsidika mitendry aminny teny pirenena ary misy vintana kely aza fa ny mpitsidika dia tsy manana ny ilaina kitendry fisehonny - hifidy ny rohy aminny tranonkala Loderi.com. Rehefa mampiasa ny kitendry ny mpitsidika dia afaka mitendry ary mandika teny ny clipboard ny zavatra rehetra ilainy noho ny taona na ny bilaogy.
An-tserasera fitendry ao aminny pejy ny toerana
koa, ny mpitsidika dia tsy te-dia mandalo ny toerana mba hametraka ny takiana soratra aminny teny pirenena. Aminity tranga ity, dia fahazoan-dalana hanampy ny virtoaly fitendry ho aminy pejy ny toerana. Habeny fitendry (rafitra) 665 X 445. Safidio ny teny irina ny fitendry virtoaly kaody ary mandika ny tenany ho aminny toerana.